बाहुन-क्षेत्री शरणार्थी हुन् भन्दै गीत, भिडियोमा जलाइयो झण्डा ! [भिडियो सहित] – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Videos/बाहुन-क्षेत्री शरणार्थी हुन् भन्दै गीत, भिडियोमा जलाइयो झण्डा ! [भिडियो सहित]
काठमाडौँ – सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने किसिमको एक भिडियो सामाजिक संजाल तथा युट्युबमा यतिबेला भाइरल भएको छ। नेपालका बाहुन-क्षेत्रीलाई गा-ली-गलौ-ज गर्दै तयार पारिएको उक्त गीतको भिडियो ‘मंगोल होप’ युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको हो।
उक्त भिडियोमा राष्ट्रिय झण्डा समेत जलाएको देखाइएको छ। ‘देशद्रोही’ टाइटल दिइएको उक्त गीतमा विशेष गरेर नेपालका बाहुन-क्षेत्री सबै शरणार्थी हुन् भन्ने देखाइएको छ भने बाहुन-क्षेत्रीकै कारण देश बिग्रिएको दावी गरिएको छ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायत सबै बाहुन-क्षेत्री रहेको भन्दै उनीहरुको तस्विरहरु जलाएको पनि देखाएको छ।
भिडियो छायाँकन मकवानपुरको पूर्वी बागमती गाउँपालिका-३ सल्लेनीस्थित विष्णु आधारभूत विद्यालयको क्षेत्रमा गरिएको बताइएको छ। भिडियोमा बागमती गाउँपालिकाकै पर्ने मदन भण्डारी लोकमार्गको पुलहरूको दृश्य पनि देखिएको छ।
सोमबार सार्वजनिक भएको उक्त भिडियोलाई अधिकांशले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। उक्त भिडियोमा लाइक भन्दा बढी डीसलाइक छ। भिडियो हेर्ने धेरै जस्तोले यस्तो भिडियो र गीत बनाउनेलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
भिडियोको सम्बन्धमा फोन र सामाजिक सञ्जालबाट आफूहरु समक्ष उजुरी आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक इन्द्र बहादुर रानाले बताएका छन्। उनका अनुसार यस सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने भिडियोमा देखिएकाहरुको खोजि भइरहेको छ।
१० महिनाकी छोरी सियोना श्रेष्ठलाइ बचाउन २५ करोड लाग्ने, लाग्यो गम्भीर रोग !!!